Uyisebenzisa kanjani iSakhi seSigama kwiPhepha lakho lePhepha
Uhlobo lwamva nje lwePhepha lePhepha elimhlophe (isizukulwana sesibini) libonelela ngesiGama seNgcaciso. Ngomakhi weSigama, unokujonga amagama kunye nesichazi-magama kwaye ukhumbule iinkcazo zabo.
m365 ipilisi emhlophe ephezulu
Ngokuzenzekelayo, lonke igama olijongileyo kwisichazi-magama longezwa kuluhlu onokufikelela kulo usebenzisa iSakhi seSigama. Ukusuka nakweyiphi na incwadi, cofa u-Imenyu-Isakhi seSigama. Isikrini esiboniswe kulo mzobo ulandelayo siyavela, sidwelisa amagama owakhangeleyo. Cofa igama ukuze ubone inkcazo yalo. Kwimenyu ebonakalayo, ungacofa indawo yokusetyenziswa ukubona ukuba lisetyenziswe njani igama encwadini.
Ukutshintsha ukujonga kuluhlu lwamagama uye kuluhlu lweencwadi oye wakhangela kuzo amagama, cofa iiNcwadi ngaphezulu kwescreen. Isikrini esiboniswe kulo mzobo ungezantsi siyavela. Cofa utolo olusekunene kwesihloko sencwadi ukuze ubone onke amagama owaphandileyo kuloo ncwadi. Ungacofa igama ukuze ubone inkcazo kunye nokusetyenziswa kwencwadi.
I-Kindle Paperwhite yakho ibandakanya inqaku leFlashcards lokukunceda ufunde amagama kuluhlu lwakho lwesigama. Njengoko kubonisiwe emazantsi omzobo wokuqala kweli nqaku, cofa iiFlashcards ukubonisa iscreen esifana nesiboniswe kumfanekiso olandelayo. Sebenzisa iintolo okanye swayipha ukuya phambili nasemva kuluhlu. I-flashcard nganye ibonisa igama ngokomxholo kwincwadi obuyifunda-ukuba awuyikhumbuli inkcazo, thepha Jonga inkcazo ukuvuselela imemori yakho. Xa ulifundile igama, cofa uMarko njengoMiselweyo ukuze ulisuse kuluhlu olusebenzayo. Thepha Phuma kwiFlashcards ngasekhohlo ukubuyela kuluhlu lwamagama olusebenzayo.
Unokumakisha igama njengeLingene kwiNkcazo yesichazi magama.
Isigama somakhi sivela kwisikrini saseKhaya kuluhlu lwakho lweencwadi. Cofa kwisakhi segama ukuze usivule, kanye njengokuba ungayenza incwadi. Ungafikelela kuMakhi weSigama (emva kokuba uyenzile okokuqala) nakwimenyu. Ukuba uluhlu lwakho kwiscreen seKhaya luhlelwe ngoKwakhiwa kweSigama kunye neVocabulary yeyona nto uyijongileyo, iya kuba phezulu kuluhlu. Ukuba isikrini sakho seKhaya sihlelwe ziiQokelelo, uMakhi weSigama uya kuba yinto yokuqala kuluhlu emva koluhlu lweengqokelela.
Njengoko sele kuphawuliwe, Isakhi seSigama sivuliwe ngokungagqibekanga. Ukucima, cofa Imenyu → Useto → Iinketho zokufunda. Tshintshela toggle ukuba Off. Ngoku Isakhi seSigama asizukuvela kwiscreen seKhaya lakho kwaye nemenyu ukhetho lweSigama seNgcaciso iya kubonakala inciphile. Nawaphi na amagama ojongana nawo kwisichazi-magama awayi kongezwa kuluhlu lwakho lwesigama, kodwa nawaphi na amagama okhe wajonga ngaphambili aya kugcinwa.
elona yeza lifanelekileyo le-nausea
uhlela njani izinto ozithandayo kwi-iphone
iziphumo ebezingalindelekanga zokugonya isifo seengcongconi
buyisela ipod classic ngaphandle kwe-itunes
iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo ze-levothyroxine
injani igenerall generic ijongeka kanjani